အသက်ဆုံးရှုံးမဲ့ အချိန်ကို ကြိုသိနေခဲ့တဲ့ အမေဖြစ်သူအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မေပန်းချီ – MC Tv Club
အသက်ဆုံးရှုံးမဲ့ အချိန်ကို ကြိုသိနေခဲ့တဲ့ အမေဖြစ်သူအကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ မေပန်းချီ
ခန္ဓာကိုယ်တောင့်တင်းလှပပြီး ဆက်ဆီကျကျဓာတ်ပုံလေးတွေကို အမြဲတမ်းတင်ပေးလေ့ရှိပြီး တစ်တုတ်လို့ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ်မင်း သမီးချောလေး မေပန်းချီ ကိုတော့ လူတိုင်းသိကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဇာတ်ပို့သရုပ်ဆောင်အဖြစ် အကောင်းမွန်ဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်ပြီးအပြုံးချိုချိုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မွန်မလေးဖြစ်တဲ့ သူမကို ပရိ သတ်တိုင်းက ချစ်ခင်ကြပါတယ်နော်။လက်ရှိမှာတော့ အနုပ ညာလှုပ်ရှားမူ့တွေမရှိပဲ Online Live Sale တွေရောင်း ချပေးနေပြီးအရမ်းကိုအောင်မြင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သရုပ်ဆောင်‌ မေပန်းချီ ဟာ ကွယ်လွန်သူ သူမမိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ထူးဆန်းတာလေးတွေကို ပြောပြလာခဲ့ပါတယ်။ ” ဘယ်ဆရာတော်ဘုရားကပဲ ကိုယ့်ကိုတွေ့တွေ့ ဘယ်ဆရာမက ပဲ ကိုယ့်ကိုတွေ့တွေ့ သမီး သမီးအမေက သမီးကိုစောင့်ရှောက်နေတာသိလား? ဆိုတဲ့စကားတစ်ခွန်းအမြဲကြားရတယ်
အမေဟာ ကိုယ်ငယ်ငယ်လေးကထဲက အရမ်းထူးဆန်းတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဆိုတာ ကိုယ်လက်ခံခဲ့တယ် သူမထွက်သွားခင်သူထွက်သွားမဲ့အသက်အပိုင်း အ ခြားကိုရေးပေးခဲ့သလို တကယ်အဲ့အသက်မှာပဲထွက်သွားခဲ့တယ် တရားထဲပျော်မွေ့နေတဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်မို့ တချို့အရာတွေဟာအခုထိထူးဆန်းနေခဲ့တုန်း” လို့ မေပန်းချီ ဟာ သူ့ရဲ့လူမူ့ကွန်ယက်ပေါ်မှာ ရေးသားထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။
သရုပ်ဆောင် မေပန်းချီ ဟာ မိခင်ကိုအရမ်းသိတတ်သူဖြစ်ပြီး ကွယ်လွန်သွားသည့်တိုင် ယနေ့အချိန်ထိ မိခင်အတွက် ကောင်းမူ့ကုသိုလ်လေးတွေ ပြုလုပ်ပေးနေတာလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆုံးထိဖတ်ရှု့ပေးတဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်ကြီးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
အသက္ဆုံးရႈံးမဲ့ အခ်ိန္ကို ႀကိဳသိေနခဲ့တဲ့ ​အေမျဖစ္သူအေၾကာင္း ေျပာျပလာတဲ့ ေမပန္းခ်ီ
ခႏၶာကိုယ္ေတာင့္တင္းလွပၿပီး ဆက္ဆီက်က်ဓာတ္ပုံေလးေတြကို အၿမဲတမ္းတင္ေပးေလ့ရွိၿပီး တစ္တုတ္လို႔ခ်စ္စနိုးေခၚၾကတဲ့ ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမာ္ဒယ္မင္း သမီးေခ်ာေလး ေမပန္းခ်ီ ကိုေတာ့ လူတိုင္းသိၾကလိမ့္မယ္ထင္ပါတယ္။
႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြထဲမွာ ဇာတ္ပို႔သ႐ုပ္ေဆာင္အျဖစ္ အေကာင္းမြန္ဆုံးသ႐ုပ္ေဆာင္နိုင္ၿပီးအၿပဳံးခ်ိဳခ်ိဳေလးကို ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ မြန္မေလးျဖစ္တဲ့ သူမကို ပရိ သတ္တိုင္းက ခ်စ္ခင္ၾကပါတယ္ေနာ္။လက္ရွိမွာေတာ့ အႏုပ ညာလႈပ္ရွားမူ႕ေတြမရွိပဲ Online Live Sale ေတြေရာင္း ခ်ေပးေနၿပီးအရမ္းကိုေအာင္ျမင္ေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
သ႐ုပ္ေဆာင္‌ ေမပန္းခ်ီ ဟာ ကြယ္လြန္သူ သူမမိခင္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ထူးဆန္းတာေလးေတြကို ေျပာျပလာခဲ့ပါတယ္။ ” ဘယ္ဆရာေတာ္ဘုရားကပဲ ကိုယ့္ကိုေတြ႕ေတြ႕ ဘယ္ဆရာမက ပဲ ကိုယ့္ကိုေတြ႕ေတြ႕ သမီး သမီးအေမက သမီးကိုေစာင့္ေရွာက္ေနတာသိလား? ဆိုတဲ့စကားတစ္ခြန္းအၿမဲၾကားရတယ္
အေမဟာ ကိုယ္ငယ္ငယ္ေလးကထဲက အရမ္းထူးဆန္းတဲ့အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဆိုတာ ကိုယ္လက္ခံခဲ့တယ္ သူမထြက္သြားခင္သူထြက္သြားမဲ့အသက္အပိုင္း အ ျခားကိုေရးေပးခဲ့သလို တကယ္အဲ့အသက္မွာပဲထြက္သြားခဲ့တယ္ တရားထဲေပ်ာ္ေမြ႕ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္မို႔ တခ်ိဳ႕အရာေတြဟာအခုထိထူးဆန္းေနခဲ့တုန္း” လို႔ ေမပန္းခ်ီ ဟာ သူ႕ရဲ႕လူမူ႕ကြန္ယက္ေပၚမွာ ေရးသားထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။
သ႐ုပ္ေဆာင္ ေမပန္းခ်ီ ဟာ မိခင္ကိုအရမ္းသိတတ္သူျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္သြားသည့္တိုင္ ယေန႕အခ်ိန္ထိ မိခင္အတြက္ ေကာင္းမူ႕ကုသိုလ္ေလးေတြ ျပဳလုပ္ေပးေနတာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုံးထိဖတ္ရႈ႕ေပးတဲ့ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္။
Previous Article ခိုင်သင်းကြည်ခင်ပွန်း ကိုခန့်နိုင် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း၏ အကြောင်းအရာ
Next Article တော်လှန်ရေး တပ်ဖွဲ့မှ သရုပ်ဆောင် မော်ဒယ် ဟိန်းထက် ၏အဘိုးအား သွေးသောက်အဖွဲ့ မှ သ.တ်ဖြတ်ခြင်းခံရ